နိုင်ငံတကာ, 07 ဒီဇင်ဘာ 2018 page 1
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က သူ့ကိုယ်သူ အခွန်စည်းကြပ်သူလို့ ကြွေးကျော်ခဲ့တဲ့ နောက် အင်္ဂါနေ့က ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် သွက်သွက်ခါ လှုပ်ခတ်သွားခဲ့
သမ္မတဟောင်း George H. W. Bush ရဲ့နိုင်ငံတော်ဈာပန အခမ်းအနား နှင့် နိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးဂါဝရ
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကို ၀ါရှင်တန်မြို့တော်ရှိ National Cathedral ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကျင်းပခဲ့ရာမှာ အမေရိကန်ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာတ၀န်း လက်ရှိနဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ တက်ရောက်
သမ္မတဟောင်း George H. W. Bush ရဲ့နိုင်ငံတော်ဈာပန အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကွယ်လွန်သူ (၄၁)ဦးမြောက် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကို ၀ါရှင်တန်ရှိ National Cathedral ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကျင်းပခဲ့ရာ အမေရိကန်ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကမ္ဘာတ၀န်း လက်ရှိနဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ၊အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေက နောက်ဆုံးဂါဝရ ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ တုန်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၅ ထောင်လောက် ကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကို ဖုံးကွယ်ထားမှု အတွက် လူသားမျိုးနွယ် အပေါ် ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ AI ရဲ့ အစီရင်ခံစာသစ်က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၀ါရှင်တန်ဒီစီမှာ ကျင်းပမယ့် ကန်သမ္မတဟောင်းရဲ့ နိုင်ငံတော်ဈာပန
အမေရိကန်ကွန်ကရက်လွှတ်တော်အဆောက်အဦးမှာ တနင်္လာနေ့ညနေ ကနေ ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအထိ ဂုဏ်ပြုထားရှိတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ၄၁ ယောက်မြောက် သမ္မတရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ထောင်သောင်းချီတဲ့ လူထုက လာရောက် ဂါရဝပြုနေကြပါတယ်။
ရုရှားအရေးစုံစမ်းရေး Michael Flynn ပံ့ပိုးကူညီခဲ့
၂၀၁၆ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ရုရှားတို့ ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အတွင်း အမျိုးသား လုံခြုံရေး အကြံပေးဟောင်း Flynn က ထိထိရောက်ရောက် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့ အထူးစုံစမ်းရေးမှူး Robert Mueller က ပြောဆိုပြီး Flynn ကို ထောင်ဒဏ်အပြစ်မပေးဖို့ ထောက်ခံ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ ၄၁ ဦးမြောက် George Bush ကိုလွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံသားတွေ ဂါရ၀ပြု
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၄၁ ဆက်မြောက် သမ္မတဖြစ်တဲ့ ကွယ်လွန်သူ George H.W. Bush အတွက် နိုင်ငံတော် ဈာပန အခန်းအနား မကျင်းပခင် အင်္ဂါနေ့မှာ အမေရိကန်အလံလွှမ်းခြုံထားတဲ့ သမ္မတ Bush ရဲ့ ရုပ်ကလပ်ထားရှိရာ ဝါရှင်တန် ဒီစီက လွှတ်တော် ဗဟိုခန်းမထဲကို ပြည်သူတွေ တဖွဲဖွဲ လာရောက် ဂါရဝပြုနေကြပါတယ်။
ဂျပန်နဲ့မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကြား တရားမဝင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဂျပန်မှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာ ၅ ဦးကို ဂျပန်ရဲက ဖမ်းဆီးလိုက် ပါတယ်။ အခုလို တရားမဝင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးနေရတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အားနည်းချက် တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူ သခင်အနားကမခွါနိုင်တဲ့ Sully ရဲ့ နောက်ဆုံးဂါရ၀
ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၁ ဦးမြောက် အမေရိကန်သမ္မတ George HW Bush ရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို နောက်ဆုံး ဂါရ၀ပြူသူတွေထဲ သမ္မတဟောင်းရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ထားရှိတဲ့ Sully ဆိုတဲ့ အိမ်မွေးခွေးလေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ သမ္မတ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ သမ္မတ Bush လက်ထက်မှာ ကမ္ဘာတလွှား တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ စစ်အေးခေတ်ကာလ၊ နျူကလီယားအန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဆိုဗီယက်ရုရှား ပြိုကွဲချိန်၊ တရုတ်နိုင်ငံအရေးအခင်း စတာတွေနဲ့ ကြုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။
၀ါရှင်တန်မြို့ တော်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဗဟိုခန်းမကြီးမှာထားရှိတဲ့ ကွယ်လွန်သူ ၄၁ ဆက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကို သမ္မတ Donald Trump နဲ့ သမ္မတကတော် Melania Trump တို့က တိတ်ဆိတ်စွာ ဂါရ၀ ပြုခဲ့ကြပါတယ်။